चीन घर्षण कागज निर्माताहरु र आपूर्तिकर्ताहरु - पूर्वी Argon रासायनिक
घर > उत्पादनहरु > रंग उपकरण > घर्षण कागज
घर्षण कागज निर्माताहरु
रंग अपघर्षक कागज चमकाने रंग को लागी प्रयोग गरिएको घर्षण कागज लाई बुझाउँछ। यसको मुख्य प्रकार्य रंग को सतह चिकनी बनाउन को लागी, विशेष गरी चमकाने को लागी हो। रंग घर्षण कागज सामान्यतया आधार कागज मा टाँसिएको विभिन्न बालुवा अनाज पीस गरेर बनाइन्छ।
विभिन्न घर्षण सामाग्री अनुसार, घर्षण कागज पानी घर्षण कागज र सुक्खा घर्षण कागज मा विभाजित गर्न सकिन्छ। यो राम्रो हात अनुभूति, उच्च शक्ति, उच्च पहनने प्रतिरोध, आँसु प्रतिरोध, कम गर्मी पीस द्वारा उत्पन्न, लामो सेवा जीवन, राम्रो चिप हटाउने प्रदर्शन, र प्रभावी ढंगले अवरोध र स्थिर बिजुली रोक्न सक्छ, कुनै धूल खतरा छैन, कुनै धूल विस्फोट, आदि।
घर्षण कागज मुख्य रूप मा सुन्तला को बोक्रा, बुलबुले, ब्रश अंक, कण अशुद्धता, तेल putty, epoxy putty, काठ, रंग, नरम धातु र रंग को सतह मा अन्य नरम सामग्री चिकनी गर्न को लागी प्रयोग गरीन्छ। कारहरु, फर्नीचर, छाला, फर्नीचर को गोला र मेकानिकल भागहरु को पीस र पोलिश, साथ साथै काठ, गैर धातु putty, र गिलास को सबै प्रकार को पीस।
पानी घर्षण कागज
पानी घर्षण कागज पोलिश र स्प्रे रंग को चमक र धातु भागहरु को अक्साइड तह हटाउन को लागी प्रयोग गर्न सकिन्छ, ताकि धातु भागहरु मूल धातु चमक पुनर्स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ।
सूखी घर्षण कागज
सुक्खा घर्षण कागज को उपयोग को समयमा ठूलो अन्तर को कारण, उत्पादन मलबे आफै बाट गिर, त्यसैले यो पानी संग प्रयोग गर्न को लागी आवश्यक छैन।
चीन मा एक पेशेवर घर्षण कागज निर्माताहरु र आपूर्तिकर्ताहरु को रूप मा, ईस्ट आर्गन केमिकल अनुकूलित को निर्माण को समर्थन गर्दछ घर्षण कागज। एकै समयमा, सबै उत्पादनहरु फैशनेबल, उन्नत, टिकाऊ र उत्तम दर्जेको, र CE प्रमाणीकरण छन्। हाम्रा उत्पादनहरु को उच्च गुणस्तर आंशिक रूपमा छ किनकि हामी हाम्रो आफ्नै कारखाना छ र आंशिक रूपले हामी अनुभवी र कुशल कामदारहरु छ। के तपाइँ थोक घर्षण कागज लाई समर्थन गर्नुहुन्छ? निस्सन्देह, यदि तपाइँ थोक, हामी तपाइँलाई सस्तो मूल्य, छुट र उद्धरण प्रदान गर्न सक्छौं। यसको अतिरिक्त, यो छुट उत्पादनहरु किन्न ठीक छ। यदि तपाइँ हामी संग सहयोग गर्न र उत्पादन किन्न चाहानुहुन्छ, हामी यसलाई कम मूल्य मा बेच्न सक्छौं। जस्तै भनिएको छ: सहयोग एक जीत-जीत हासिल गर्न! हामी तपाइँ संग सहयोग र एकसाथ साझा विकास साकार गर्न को लागी तत्पर छौं।